Body Insurance:No misy dikany ny antoka ny amin'ny vatan'olona?
Efa nieritreritra ny insuring ny vatana faritra? Na dia mety tsy ho porofoina mbola tany Nizeria, dia tsaho fa ny malaza Juju mozika, Sunny King Ade, azo antoka ny gitara-nioty rantsan ho be an-tapitrisany Naira raha ny sasany dismemberment ireo rantsan-. Nahoana no? Izany dia satria ny Juju Maestro dia fantatra ho toy ny tena fahaizana gitara-milalao mozika ao Nizeria, sy miverimberina ary symphonic gitara sorisory mibahana ny marika ny Juju mozika. Ao amin'ny sehatra vahiny, ny busty Queen ny Country Music, Dolly Parton dia fantatra fa efa azo antoka ny bosoms goavana ho an'ny olona an-tapitrisany dolara; mandritra izany, Gene Simmons, Jennifer Lopez, ary Michael Flatley eo olo-malaza maro hafa no fantatra fa azo antoka ny tongony, bums, orona, ary ny hafa "teo aloha sy sarobidy" ny faritra ho an'ny lehibe vatana vola ny fiantohana.
Nahoana no? Ny antony dia tsy lavitra-naka. Vatana ireo faritra azo antoka, ireo olo-malaza, dia ny loharanom-vola miditra sy ny tena marika ny olo-malaza sata. Ireo olo-malaza hahatakatra fa misy very na simba ny vatana ireo faritra mety hampihena ny fahaizany mba hiteraka fidiram-bola tsara, ary noho izany dia haingana-bola ireo faritra vatana noho ny tahotra ho azy ireo, ka afaka handrakotra compensations fiantohana na inona na inona intsony ny vola miditra noho ny vatana ireo faritra. Hahatakatra bebe kokoa izany raha toa ianao ka Nizeriana, inona no Cossy Orjiakor ho tsy misy ny be nono? Ny lehibe dia ny marika bosoms sy nivarotra-teboka ho toy ny olo-malaza mpilalao sarimihetsika sy ny Nizeriana artiste; ka dia azon'ny ho azy na inona na inona mitranga hatahotra azy be bosoms, ary raha manapa-kevitra ny antoka azy ireo satria ireo no ny fananana sy ny tsena ny marika eo amin'ny sehatra sarimihetsika Nizeriana.
Ankehitriny, no misy dikany ho anao-bola ny vatana ny faritra raha tsy misy olo-malaza? Ny marina dia kely mahatonga ny tsy misy dikany ny hanao izany, na dia miantehitra aminao toy ny zava tsara mpamily; ny rantsan-tananareo ho toy ny solosaina programa; ary tsara tongony ho modely. Azo antoka fa tsia anao ho afaka na dia nahita orinasa fiantohana izay ho vonona-bola ny vatana faritra, afa-tsy vitsivitsy ao amin'ny United Kingdom. Insuring ny vatana mety ho faritra tena lafo raha tsy ianao no olo-malaza maneran-tany, ary tena manan-karena; fa misy koa fomba hafa tena tsara.
Dia afaka mandeha ho fiantohana ny fiainana politika, satria izany dia ho avy cater ny fampiasam-bola sy ny fisotroan-dronono filàna, ary koa ny fianakavianao cater ilain'ny araka ny fahalavoan'i. Fa raha tsy tianao ny feon'ny fiainana fiantohana, dia afaka misafidy ny toeram-piasana kilema ianao fiantohana andraisana nanarona ny toeram-piasana na ny orinasa loza. Amin'ny toeram-piasana ny kilema na dismemberment fiantohana, dia afaka ho onitra raha toa ka very ny tongony na ny fahitana eo amin'ny mazava ho azy ny asa. Izany dia mihoatra takatry ny safidy tsara sy ny insuring ny vatana faritra, raha tsy dia tena manan-karena sy ny toy izany no faritra tena azo antoka ny fananana sy ny marika ho toy ny olo-malaza.